Ikhaya > Izindaba > Izindaba zezimboni > Isingeniso kumikhiqizo yepulasitiki yasendlini
Ama-plastiki ayizinhlanganisela ze-polymer, ezaziwa kakhulu ngokuthi ama-plastiki noma ama-resin, afakwa polymerized ngokufaka noma ukufingqa kwama-monomers njengezinto zokusetshenziswa. Bangashintsha ngokukhululekile ukwakheka nokuma kwabo. Zakhiwe ngama-resin zokwenziwa, ama-filler, ama-plasticizers, ama-stabilizers, ama-lubricants, ama-colorants nezinye izithasiselo.
I-Polyethylene terephthalate (PET)
Amanzi amaminerali ajwayelekile namabhodlela esiphuzo e-carbonated enziwe nge-polyethylene terephthalate (PET) Ngo-1946, i-United Kingdom yakhipha ilungelo lobunikazi lokuqala lokulungiselela i-PET. Ngo-1949, ifomula ye-ICI yaseBrithani yaqedela ukuhlolwa kokushayela izindiza, kodwa ngemuva kokuba i-United States DuPont Company ithenge ilungelo lobunikazi, idivayisi yokukhiqiza yasungulwa ngo-1953, futhi umkhiqizo wokuqala wezimboni watholakala emhlabeni.
1, ukumelana no-oyela, ukumelana namafutha, i-enic acid, ukuncipha kokumelana kwe-alkali, izixazululi eziningi.
2, ukwenza izinto obala okuphezulu, ukudluliswa kokukhanya kungafika ngaphezu kwe-90%, izimpahla ezihlanganisiwe zinomsebenzi omuhle wokubonisa.
I-3, inokumelana okushisa okuphansi okuhle kakhulu, ingamelana -30â „ƒ lokushisa okuphansi, ebangeni lokusetshenziswa kwe -30â„ ƒ-60â „ƒ.
4, i-permeability yegesi namanzi iphansi, zombili ukumelana negesi, amanzi, uwoyela nokusebenza kwephunga elikhethekile.
5, ukwenza izinto obala okuphezulu, kungavimba ukukhanya kwe-ultraviolet, ukukhanya okuhle.
Isiphuzo amabhodlela angeke kabusha ngamanzi ashisayo, lokhu ukushisa impahla ukumelana 70â „ƒ, izinga lokushisa eliphezulu ziyoncibilika izinto eziyingozi, kuphela efanelekayo iziphuzo ezifudumele noma iziphuzo eqandisiwe, izinga lokushisa eliphezulu uketshezi noma Ukushisa kulula ukuba zikhubazeke, kukhona izinto eziyingozi ukuze umzimba womuntu wancibilika.
Olandelayo:Ukwethulwa kwemikhiqizo yeplastiki ye-PC